Fiantraikan'ny COVID-19 amin'ireo mararin'ny voa mampiasa dialyse
Ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny famatsiana dia nahatonga ny fanakatonana ny toeram-pisakafoanana sy ny fihemorana amin'ny fifindran'ny marary amin'ny dialyse, ny hopitaly ary ny tobim-pitsaboana mahay (SNF). Na dia manamora ny fanalavirana ny fiaraha-monina aza ny fanafainganana ny fidirana amin'ny dialyse ao an-trano ary mety hampihena ny tsy fahampian'ny mpiasa, dia tsy hamaha ny olana goavana io vahaolana mety hitranga io. Ilaina ny fandraisana andraikitra haingana mba hahazoana antoka fa afaka mahazo kojakoja sy mpiasa ilaina ny trano fanaovana dialyse.
Ny NKF sy ny ASN dia manoro ny governemanta federaly, fanjakana ary eo an-toerana:
• Miditra an-tsehatra mba hanamaivanana ny krizy famatsiana (oh: concentrate dialysate) eny amin'ny toeram-pisakafoanana noho ny tsy fahampian'ny trano fanatobiana entana sy ny kamiao.
• Manaparitaka saron-tava avo lenta nankatoavin'ny fanjakana amin'ny toeram-pitsaboana.
• Atsaharo ny fitsipika misy amin'izao fotoana izao ataon'ny Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) izay mitaky ny fampiasana siringitra efa feno sira, izay tsy hita any amin'ny toerana sasany, mandra-pahalasan'ny krizy mafy.
• Amporisiho ny governemantam-panjakana sy federaly hamela ny fifanandrifian'ireo mpitsabo mpanampy amin'ny alalan'ny fanazarantena ao anatin'ny fanjakana, na inona na inona fanjakana mitambatra, mandritra izao krizy mafy izao.
Misy olona 783,000 any Etazonia izay voan'ny tsy fahombiazan'ny voa, ary latsaky ny 500,000 amin'ireo olona ireo no mila dialyse mahavelona aterina ao amin'ny foibe fanaovana dialyse in-telo isan-kerinandro, adiny efatra isan'andro. Mandritra ny fitsaboana dialyse, matetika ny marary dia mipetraka eo akaikin'ny marary sy mpiasa hafa ao amin'ny tobim-pitsaboana tsy misy rivotra tsara foana. Maro amin'ireo marary ireo no zokiolona, ​​ambany fidiram-bola, ary avy amin'ny vondrom-piarahamonina sahirana ara-tantara, ary ny ankamaroany dia manana aretina toy ny diabeta sy aretim-po.
Na eo aza ny ezaka ataon'ny fikambanana dialyse, ny nephrologista ary ny mpitsabo hafa mba hampiadana ny fiparitahan'izy io, ny COVID-19 dia mitohy manjaka amin'ny alàlan'ny trano fanaovana dialyse. Araka ny angon-drakitra avy amin'ny US Renal Data System, 15.8% amin'ireo marary rehetra manao dialyse any Etazonia no voan'ny COVID-19 hatramin'ny faran'ny taona 2020. Nandritra ny onja ririnina 2020, dia nahatratra 19 ny isan'ny maty isan-kerinandro noho ny COVID-20. % ary ny fahafatesana isan-taona nandritra ny 2020 dia 18% ambony noho ny tamin'ny 2019.1
Na dia eo aza ireo tahan'ny otrikaretina sy ny fahafatesan'ny olona marobe ireo, ny marary dialyse dia tsy natao laharam-pahamehana amin'ny fidirana amin'ny vaksiny rehefa tonga ny vaksiny herintaona lasa izay na dia misy aza ny porofo mampiseho fa ny valin'ny fiarovana amin'ny vaksiny dia mibontsina amin'ny marary dialyse. Ankoatr'izay, na dia mihena haingana kokoa aza ny tahan'ny antibody amin'ny marary dialyse noho ny amin'ny mponina amin'ny ankapobeny, ny marary dialyse dia tsy nomen'ny Food and Drug Administration (FDA) na ny Centers for Control and Prevention aretina (CDC) ho laharam-pahamehana rehefa nekena ny fatra fahatelo amin'ny vaksiny. tamin'ny Aogositra.2 Fanampin'izany, ireo marary dialyse dia nesorina tamin'ireo vondrona mendrika hahazo fitsaboana antibody prophylactic maharitra mikendry ny virus SARS-CoV-2. Farany, ny National Institutes of Health dia tsy nahazo famatsiam-bola ho an'ny fikarohana COVID-19 hanampiana ireo olona voan'ny aretin'ny voa na tsy fahombiazana amin'ny fonosana fanampiana tamin'ny taon-dasa.
Ny fanamby iray hafa dia ny tsy fisian'ny fitsaboana sahaza ho an'ny olona voan'ny tsy fahombiazan'ny voa. Na dia mipoitra aza ny fitsaboana mampihena ny risika amin'ny COVID-19, ny famantarana amin'izao fotoana izao dia manilika ny olona voan'ny tsy fahombiazan'ny voa satria matetika ireo olona ireo dia tsy tafiditra amin'ny fitsapana klinika. Tsy azo ekena io fanao io. Ny NKF sy ny ASN dia miangavy ny mpanamboatra mba hahazoana antoka fa ireo vokatra ireo dia misy fatrany ho an'ny marary voan'ny tsy fahombiazan'ny voa. Fanampin'izay, mamporisika ny FDA izahay hamantatra ny fihenan'ny tsimatimanota amin'ny olona voan'ny vaksiny voan'ny tsy fahombiazan'ny voa ary hiantoka fa ny fitsaboana dia ankatoavina amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana vonjy maika (EUA) ho an'ireo marary voan'ny immunocompromised.
Rehefa nividy fanafody COVID-19 ny Biden Administration hozaraina any Etazonia, dia zava-dehibe ny laharam-pahamehana ny marary sy ny mpiasa amin'ny dialyse amin'ny fidirana. Ny tsy fanaovana laharam-pahamehana ny marary dialyse amin'ny fidirana amin'ny vaksiny tamin'ny fiandohan'ity areti-mifindra ity dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny hopitaly sy ny fahafatesana. Tsy tokony havelantsika hitranga indray io fahadisoana io.
Farany, ny COVID-19 dia mifandray amin'ny risika lehibe amin'ny ratra amin'ny voa (AKI), na dia amin'ny olona manana fiasan'ny voa voatahiry aza, ka miteraka aretina mafy ary fahafatesana mihitsy aza, ary matetika mitaky dialyse sy endrika fitsaboana fanoloana voa hafa. Imbetsaka nandritra ny areti-mifindra, ary indray mandeha, nandritra ny firongatry ny Omicron ankehitriny, hopitaly maro no nitolona tamin'ny fanomezana an'io fitsaboana mamonjy aina io ho an'ny marary noho ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny kojakoja voaofana.
Tsy maintsy manao izay rehetra azony atao i Etazonia mba hiomanana amin'ny fisondrotan'ny raharaha COVID-19 amin'ny ho avy ary hisorohana ny fahafatesana tsy ilaina amin'ireo olona marefo indrindra eto amintsika. Ny NKF sy ny ASN dia vonona ny hiara-hiasa amin'ny mpanao politika sy ny mpanamboatra mba hanatanterahana izany tanjona izany.
Ny zava-misy momba ny aretin'ny voa
Any Etazonia, olon-dehibe 37 tapitrisa no tombanana ho voan'ny aretin'ny voa, antsoina koa hoe aretin'ny voa mitaiza (CKD) — ary eo amin'ny 90 isan-jato eo ho eo no tsy mahafantatra fa manana izany izy ireo. 1 amin'ny olon-dehibe 3 any Etazonia no atahorana ho voan'ny aretin'ny voa. Ny antony mahatonga ny aretin'ny voa dia ahitana: diabeta, tosidra ambony, aretim-po, matavy loatra, ary tantaram-pianakaviana. Ny olona avy amin'ny Black/African American, Hispanic/Latino, American Indian/Alaska Native, Asian American, na Native Hawaiian/Other Pacific Islanders dia atahorana hivoatra io aretina io. Ny mainty hoditra/amerikanina dia avo in-3 avo heny noho ny fotsy hoditra no voan'ny tsy fahombiazan'ny voa. Ny Hispanika/Latinos dia 1.3 heny noho ny tsy Hispanika ny tsy fahampian'ny voa.
Manodidina ny 785,000 eo ho eo ny Amerikanina manana tsy fahampian'ny voa tsy azo ivalozana ary mila dialyse na famindrana voa mba ho velona. Maherin'ny 555,000 amin'ireo marary ireo no mahazo dialyse hanoloana ny fiasan'ny voa ary 230,000 no miaina miaraka amin'ny transplant. Manodidina ny 100,000 ny Amerikanina ao anatin'ny lisitra miandry amin'ny famindrana voa amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny toerana misy ny marary iray, ny salan'isan'ny fotoana fiandrasana amin'ny famindrana voa dia mety ho mihoatra ny telo ka hatramin'ny fito taona.
More on: Food and Drug Administration | Foibe Miady Amin'ny Aretina | Drug | Etazonia | Covid-19 | fahasalamana
Ny FDA dia mankasitraka ny fitsaboana voalohany amin'ny aretin'i Wilson tao anatin'ny 5 taona mahery Food and Drug Administration, fahasalamana, Etazonia|
Ny tatitra vaovao dia mampifandray ny aretina psoriatika sy ny fahasalamana ara-tsaina fahasalamana|
Foibe Miady Amin'ny AretinaCovid-19DrugFood and Drug AdministrationfahasalamanaEtazonia
Previous Gates sy Wellcome Fanomezana 300 tapitrisa dolara amerikana ho an'ny valin'ny COVID-19
Manaraka Fitsapana ra vaovao haminavina ny aretin'i Alzheimer aloha